1. လူလိမ်တွေကို သတိထားပါ၊ အလိမ်အညာတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားကြမလဲ
ipivi.com သည် အခမဲ့ပြည်တွင်းကြော်ငြာဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ရှာဖွေကြည့်ရှုရလွယ်ကူသည့် အခမဲ့ကြော်ငြာများကို ဖော်ပြပေးသော မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။ဒီနေရာမှာ အလုပ်အကိုင်၊နေအိမ်အဆောက်အအုံများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများ၊အလိုရှိသမျှပစ္စည်းများ၊ဝန်ဆောင်မှုများ၊အလုပ်လျှောက်လွှာများ စသည့်ကဏ္ဍများစွာဖြင့် ကြော်ငြာများကို အသေးစိတ်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာအားလုံးကအခမဲ့ဖြစ်ပြီး ရှာရလွယ်ကူပါသည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်သည် ဘယ်ဆိုင်ထက်မဆို ဈေးသက်သာသည့်ပစ္စည်းကို အချိန်တိုအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ဖို့အာမခံသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အထင်ရှားဆုံးနှင့် အထူးခြားဆုံး ပြိုင်ဘက်ကင်းကြော်ငြာဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်ကပဲ ဝယ်သူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် နည်းလမ်းသစ်များအမြဲထွင်နေသည့် မလိုလားအပ်သော လူလ်ိမ်လူကောက်များ မျက်စိကျစရာဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့မဖြစ်ရန် ကာကွယ်ရမည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်သူများကို အဖြစ်များဆုံးလိမ်လည်မှုများအကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။ သေချာစွာဖတ်ရှု၍ သတိရှိကြစေလိုပါသည်။
ipivi တွင် ဘေးကင်းစွာဝယ်ယူခြင်း၊ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များ၏အကျိုးစီးပွား ကို ကာကွယ်၍ ဝယ်သူများအားလုံး၏လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟုခံယူထားပါသည်။
လုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာအခြေခံစည်းမျဉ်းများက လူလိမ်နှင့် ဝယ်သူ၊ရောင်းသူအစစ်အမှန်များကြားမှ ကွာခြားချက်ကို မြင်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မည်။အဖြစ်များဆုံး လိမ်လည်မှုများအကြောင်းကို သတိထားသိရှိထားခြင်းက လူလိမ်များကိုရှောင်နိုင်ရန် သင့်ကိုအကူအညီဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါအခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါက လိမ်လည်ရန်နှင့် လှည့်ဖြားရန်ကြိုးပမ်းမှုများကို လွယ်ကူစွာရှောင်ရှား နိုင်ပါမည် -
3. သင်သည် ipivi နှင့် အလုပ်လုပ်နေခြင်းဟုတ်မဟုတ် သေချာစစ်ဆေးပါ
သံသယရှိဖွယ် လင့်ခ်များသုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ရောက်ရှိလာပါက ipivi သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို တောင်းပါလိမ့်မည်။ မပေးပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ဖုန်းအကောင့်ထဲမှ ငွေများခိုးထုတ်ခံရနိုင်သည်။
ipivi သည် အခမဲ့ကြော်ငြာဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ ငွေပေးစရာမလိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။
4. အလွန်မက်မောဖွယ်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းမှုများကို သတိထားပါ
ဈေးကချိုလွန်းနေလျှင်၊သတိထားပါ။ တစ်ခါတရံ သုံးစွဲသူများကို များနိုင်သလောက် များများဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ဈေးနှုန်းကို လိမ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအတု သို့မဟုတ် အရည်အသွေးနိမ့်အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် ပစ္စည်းဝယ်ယူချိန်တွင် သတိသာထားပါ။
5. စိတ်ချယုံကြည်ရသော ရောင်းသူများကိုရွေးချယ်ပါ
ပစ္စည်းကိုတခြားမြို့မှပို့ဆောင်ရမည်ဟု ရောင်းသူက ဆိုကာ ကြိုတင်ငွေတောင်းခံနေပြီး သူ့အပေါ်ယုံလို့ရမရ မသေချာသေးသည့်အနေအထားဖြစ်ခဲ့လျှင် ကြိုတင်ငွေပေးချေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဝယ်ယူလို့ရမည့် ရောင်းသူကိုရွေးချယ်တာပိုကောင်းပါသည်။
6. မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုမှ မပြသပါနဲ့ (ပတ်စပို့၊ ဘဏ်ကတ်နဲ့ အကောင့်နံပါတ် စသည်)
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိရှိခွင့်ရရန် သင့်ကိုသွေးဆောင်ကြိုးပမ်းလာလျှင် သင်သည် မရိုးဖြောင့်သောဝယ်သူ သို့မဟုတ် ရောင်းသူနှင့်တွေ့နေပြီဆိုသည့် ကနဦးလက္ခဏာဖြစ်သည်။
7. လုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာတစ်ခုတွင် ရောင်းသူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပါ
ဤနည်းက သင်အလိမ်ခံရမည့်အန္တရာယ်သိသိသာသာနည်းပါးစေမည်ဖြစ်ကာ ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
8. ငွေစက္ကူများကို သေချာစစ်ဆေးပါ
လင်းလင်းချင်းချင်း နေ့ဘက်အချိန်တွင် အရောင်းအဝယ်လုပ်လျှင် သင်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းအတွက် ငွေစက္ကူအတုများ ရရှိလိုက်ခြင်းများမဖြစ်စေမည့်နည်းဖြစ်သည်။
1. ကြိုတင်ငွေပေးချေပြီးမှ ပစ္စည်းပို့ခြင်း
ကြိုတင်ငွေအကျေချေပြီးမှ ပစ္စည်းပို့မည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသည့် ရောင်းသူများကို သတိထားရန်အရေးကြီးသည်။အထူးသဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံ၍ရနိုင်မည့်ကိစ္စမျိုးတွင်ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ရောင်းသူက သင့်ကိုငွေပြန်အမ်းမအမ်းကို အာမခံချက်မရှိသည်ကို သတိရပါ။ အနည်းဆုံးတော့ သင်နေထိုင်ရာမြို့ထဲတွင်ပဲ အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းက ပိုစိတ်ချရပါသည်။စိတ်မပူပါနဲ့။ ipivi တွင်ရှိသော ကျယ်ပြန့်သည့်ကြော်ငြာအသစ်များထဲမှ အလားတူကုန်ပစ္စည်းကို ရှာတွေ့နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကအာမခံပါသည်။
2. အီးမေးလ်နှင့် မက်ဆေ့များပေးပို့ခြင်း
တခါတရံ လူလိမ်များက သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကို လှည့်ဖြားသိရှိနိုင်ရန် ipivi ၏တရားဝင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသုံး၍ မက်ဆေ့ပို့ခြင်း၊ အီးမေးလ်အတုများပေးပို့ခြင်းများလုပ်နိုင်သည်။ ထိုအီးမေးလ်များတွင် အကြောင်းအရာမျိုးစုံပါနိုင်သည်( ဥပမာ- လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပြောင်းလဲရန်၊ ကြော်ငြာတစ်ခု၏ရီပို့အကြောင်း အသိပေးချက်၊၊ သို့မဟုတ် သတင်းအသိပေးချက်)။ မလိုလားအပ်သော မက်ဆေ့များတွင်ပါဝင်သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များကို မဝင်ပါနဲ့၊ ဖိုင်များကို မဖွင့်ပါနဲ့
Phishing လိမ်လည်မှုက အဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်အများဆုံး အီးမေးလ်မှတဆင့်လိမ်လည်မှု အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
Phishing လိမ်လည်မှုကို သိရှိနိုင်မည့် အဓိကလက္ခဏာများမှာ-
• ပေးပို့သူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာက ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် မကိုက်ညီခြင်း
• မက်ဆေ့တွင် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့် အစမပြုခြင်း(ဥပမာ- လေးစားရပါသော ဝယ်ယူအားပေးသူရှင့်/ခင်ဗျ)။ ကုမ္ပဏီအစစ်အမှန်များက မက်ဆေ့တွင် သင့်အမည်ကို အမြဲထည့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
• မက်ဆေ့က ထိုကုမ္ပဏီထံမှ သင်လက်ခံရရှိခဲ့ဖူးသော တခြားမက်ဆေ့များနှင့် မတူကွဲပြားနေခြင်း
• မက်ဆေ့က ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ် သို့မဟုတ် အကောင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့လို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တောင်းနေခြင်း
ရောင်းသူ(ဝယ်သူ)က မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်စေ သင့်ဘဏ်ကတ်နံပါတ်နှင့် CVV code၊ဘဏ်အကောင့် နံပါတ်စသည်တို့လို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တောင်းနေပါက ထိုသို့ပြောပြခြင်းက သင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရေနဲ့ ငွေကြေးစိတ်ချရမှုမရေမရာဖြစ်စေသည်။ သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိုသိပ်ထားပြီး ကိုယ်အပြည့်အဝ နားမလည်သည့် မည်သည်ငွေလွှဲခြင်းမျိုးကိုမဆို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုပါနဲ့
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီက သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တစ်ခုကိုမှ ဘယ်သောအခါမှ သိရှိရန် တောင်းဆိုခြင်းမရှိကြောင်း သတိရပါ။
ipivi စာများနှင့် သံသယရှိဖွယ် အီးမေးလ်များ၏ အဓိကဝိသေသများကို စစ်ကြည့်ပါ
ipivi မှ အီးမေးလ်အစစ်
သင့်ထံမှ လျှိှု့ဝှက်နှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန်တောင်းဆိုသည်
ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်တွင်ရှိသော သုံးစွဲသူများ၏ ကြေ်ာငြာများနှင့် သက်ဆိုင်သည်များကိုသာ မေးမြန်းလေ့ရှိသည်။
အရေးပေါ်အမြန်လုပ်ဆောင်ခြင်း - သင့်အကောင့်ကို ပိတ်ခံရခြင်း၊ဖျက်ခံရခြင်းရှိလာလျှင် အသိပေးခြင်း။
စာကိုသေချာစွာဖတ်၍ ipivi ရှိ သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ပါ။ အီးမေးလ်တွင်ဖော်ပြထားသောပြဿနာသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူးတွဲဖိုင်များနှင့် သံသယရှိဖွယ်လင့်ခ်များတွဲ၍စာပို့လေ့မရှိပါ။ မည်သည့်အခြေအနေတ်ွငမှ ထိုဖိုင်များ၊ လင့်ခ်များကို မဖွင့်ပါနဲ့။
"လေးစားရပါသော ipivi သုံးစွဲသူခင်ဗျာ" ကဲ့သို့သော ရေးသားပုံစတိုင်မျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း-
ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်တွင် သင့်အကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသော အမည်ဖြင့်သာ သင့်ကို ရည်ညွှန်းရေးသားပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာရပ်များပါဝင်နေသည့် စာကို လက်ခံရရှိပါက ဖွင့်မကြည့်ဘဲ လျစ်လျူရှုနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ ipivi အကောင့်ကို ပြန်စစ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
3. အလိမ်အညာ လှိမ့်လုံးများကို မျက်စိမှိတ်မယုံကြည်ပါနဲ့
လိမ်ညာသည့်အီးမေးလ်များသည် လုံးဝစိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်။ ထိုအီးမေးလ်များလက်ခံရရှိခြင်းသည် သင့်၏စာတိုက်ပုံးအား ပိုပို၍ရှုပ်စေပါသည်။ မလိုလားအပ်သောအီးမေးလ်များကို ဘယ်တော့မှ စာမပြန်ပါနဲ့။ ကာကွယ်မှုရှိထားရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းထဲတွင် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တစ်ခုမှလိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်ထံစာပို့လာသည့်သူကို သင်ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်သရွေ့ ထိုက်သင့်သလိုစာပြန်ခြင်း၊သို့မဟုတ် မေးခွန်းများမေးခြင်းတို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့။ မှာယူမှုဘယ်လိုပြန်ပယ်ဖျက်မလဲဆိုသည်ကို ထိုအီးမေးလ်ကမဖော်ပြခဲ့လျှင်တောင် အီးမေးလ်တွင်ပါသည့်မည်သည့်လင့်ခ်ကိုမှ မနှိပ်ပါနဲ့။ သင့်အမည်ကို စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးမည်ဟုကတိပြုပေးသော ဆိုက်များကို စာရင်းမသွင်းပါနဲ့။
4. သင်အသုံးပြုနေသည်မှာ ipivi.com ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဆိုက်နှင့်ဆင်တူသော ဝဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများ
သင်အနေဖြင့် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာပြီး ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်ပါသည် -
သင်မသိသောသူများထံမှပေးပို့လာသောလင့်ခ်များနှင့် အီးမေးလ်မှ မရေရာသည့်စာအဖြစ်လက်ခံရရှိသောလင့်များ သို့မဟုတ် အမည်မသိ အက်စ်အမ်အက်စ်မေးလ်များမှပေးပို့လာသည့်လင့်များကို မနှိပ်ပါနဲ့။
သူစိမ်းတစ်ဦးထံမှလက်ခံရရှိသော ထိုလင့်မျိုးကို နှိပ်မိပါက URL တွင်သေချာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ipivi ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်အရင်းအမြစ်များသည် URL တွင် “ipivi.com/” ဟုအမြဲပေါင်းစပ်ပါရှိသည်။ အခြားလင့်ခ်များသည် Ipivi နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် အတုအယောင်များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဝဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်သည့်အခါ လိပ်စာဘား၏ဘယ်ဘက်တွင် သေချာကြည့်ပါ။ipivi ဝဘ်ဆိုက်အစစ်အမှန်သည် “lock” သင်္ကေတပါရှိပါက လိပ်စာမှန်ကန်သည့်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ ipivi သည် ဝယ်သူများ၏လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို အလေးထားသည့်အပြင် ကွန်ရက်လုံခြုံရေးကျင့်ဝတ်လည်းထားရှိပါသည်။ သုံးစွဲသူအားလုံး၏အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းပြီးမှ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့် သံသယရှိနေပါက အလိုရှိသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အဖြေတစ်ခုရှိပါသည်။ ဘရောက်ဇာတွင် “ipivi.com” ဟုသာ ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။